Fanarahan-dia tany Betroka :: Dahalo iray maty voatifitra teny am-pandosirana • AoRaha
Fanarahan-dia tany Betroka Dahalo iray maty voatifitra teny am-pandosirana
Maty voatifitry ny mpanara-dia teo am-pandosirana ny iray tamin’ny dahalo telo voasambotra tany Ambondro II, Betroka, tamin’ny alakamisy lasa teo. Efa natolotra ny Fitsarana, ka voatazona am-ponja vonjimaika ny roa tamin’ireo azo sambo-belona.
Niara-niainga tao an-tanàna ny zandary sy ny solontenan’ny fokonolona nanara-dia nitady omby very tany amin’ny distrikan’Iakora, tamin’ny alin’ny talata 2 septambra lasa teo. Tonga tao amin’ny toerana heverina ho misy ny omby very izy ireo, roa andro taorian’izay. Vosambotra tao ny lehilahy roa voatondro ho dahalo raindahiny niaraka tamin’ny ombiasa iray. Nahatrarana basy roa sy bala ary karazana fanafody gasy teny amin’izy ireo. Hita tao ihany koa ny omby efatra ambin’ny folo anisan’ireo very.
«Noentina avy hatrany ireo telo lahy voasambotra. Nanao vela-pandrika hakana azy ireo ny dahalo sasany. Nisy ny fifampitifirana. Nitohy ny dia avy eo. Nisy ny fifandonana faharoa sy fahatelo farany teo amin’ny mpanara-dia sy ny dahalo dimampolo lahy. Nanararaotra nitsoaka hamonjy ny namany ny iray tamin’ireo telo lahy voasambotra hany ka voatifitra.
Niparitaka nandositra ireo dahalo am-polony rehefa nahita an’io lavo io», araka ny fanampim-baovao avy amin’ny mpitandro ny filaminana. Nieren-doza ny mpanara-dia rehetra. Tonga tany Betroka izy ireo, ny sasak’alina, niaraka tamin’ireo dahalo roa ambiny.
Hainahandro sy fikarakarana lakozia :: Hisy fampiofanana maimaimpoana momba ny fandrahoan-tsakafo etsy Andavamamba